Zencastr: सजीलै तपाइँको पोडकास्ट साक्षात्कार अनलाइन रेकर्ड Martech Zone
Zencastr: सजीलै तपाइँको पोडकास्ट साक्षात्कार अनलाइन
बिहीबार, मार्च ० 2, २०२० शुक्रबार, मार्च 3, 2017 Douglas Karr
पोडकास्टिंगमा सबै साथी र रचनात्मक मास्टर जेन एड्स हुन् ब्रासी प्रसारण कम्पनी। म उनलाई प्रायः भेट्न सक्दिन, तर जब म यो गर्दछु म सधैं हाँसोको पात्र हुन्छु। जेन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हुन् - उनी हाँसउठ्दो छिन्, उनी एक प्रतिभाशाली संगीतकार र गायक हुन्, र उनी मलाई चिन्ने सब भन्दा अनुभवी पोडकास्टरहरू हुन्। त्यसोभए, जब उनले मसँग एउटा नयाँ उपकरण साझा गर्‍यो भने तपाई छक्क पर्नु हुन्न जुन तपाईंलाई रूचि हुन सक्छ - जेनकास्टर.
यदि तपाईं एक अनुभवी पोडकास्टर हुनुहुन्छ, संभावना छ कि तपाईंसँग एक छ मिक्सर बोर्ड र माइक्रोफोन र हेडफोनको एक महान सेट। यदि तपाईं नयाँ पोडकास्टर हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग एउटा हुन सक्छ डिजिटल मिक्सर। जटिलता सुरु हुन्छ जब तपाईं टाढाका पाहुनाहरू ल्याउन चाहानुहुन्छ। हामी हाम्रो संगठन छ इंडियानापोलिस पोडकास्ट स्टूडियो म्याक मिनी र एक जोडी USB अडियो इन्टरफेसको साथ स्काईप वा अन्य कुनै अडियो आउट गर्नका लागि हाम्रो मिक्सरमा।
जब त्यस टेक्नोलोजीलाई हल गर्दछ, तब तपाईले आफ्नो मिक्सर वा प्रोग्राम गर्नु पर्ने डिजिटल डिजिटल मिक्सरलाई तपाईंको इन-स्टुडियो मान्छेहरूलाई तपाईंको बसमा अनलाइन आउटपुटमा आउटपुट दिनको लागि। र तपाइँले तपाइँको अतिथिको आवाज पछाँट नगर्न सुनिश्चित गर्नुपर्दछ अन्यथा, तपाइँका अनलाइन अतिथिहरूले प्रतिध्वनि सुने। केवल तपाईंसँग ती मुद्दाहरू छन्, तर धेरै अनलाइन संचार प्रोग्रामहरू (स्काईप जस्तो) क्लिप र अडियो डाउनग्रेड। कसैको फोनमा रेडियो स्टेशनमा डायल गर्दा यो सुन्न सक्दछ।
के तपाईंले त्यो सबै पाउनुभयो? हो ... यो समय मा धेरै निराश भएको छ। मैले स्थानीयसँग काम गरें अडियो ईन्जिनियर ब्रैड शूमेकर र Behringer ईन्जिनियरहरू यो सबै काम ठीक गरीरहेको छ र हामी क्लीनर अनलाइन रेकर्डिंगका लागि अडियो प्लेटफार्महरूको गुच्छाको साथ प्रयोग गरेका छौं।
अवश्य पनि, तपाईलाई यसको कुनै पनि आवश्यक छैन जेनकास्टर यहाँ छ! जबकि त्यहाँ रेकर्डिंगका लागि अन्य अनलाइन प्लेटफर्महरू छन् - जस्तै BlogTalkRadio (हामी छोड्यौं किनकि हामी गुणवत्ता अडियो अनलाइन रेकर्ड गर्न सकेनौं), Zencastr प्रदान गर्दछ उच्च-गुणवत्ता रेकर्डिंग र पोडकास्टका लागि निर्मित हो जुन विभिन्न स्थानहरूबाट धेरै पाहुना हुन सक्छ।
Zencastr बादलमा रेकर्डर राख्नु जस्तै हो, र सीमित मिक्सिंग क्षमताहरू पनि छन्:
प्रति अतिथि अलग ट्र्याक - जेनेकास्टरले प्रत्येक आवाज स्थानीय स्तरमा रेकर्ड गर्दछ। खराब जडानको कारण अधिक ड्रपआउटहरू छैनन्। शोको बखत गुणमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन्। क्रिस्टल स्पष्ट अडियो बाहेक केहि छैन।
हानि रहित WAV मा रेकर्ड - गुणवत्तामा सम्झौता नगर्नुहोस्। जेनकास्टरले तपाईंको पाहुनाहरूलाई हानिविहीन १--बिट .16 44.1.१ के WAV मा रेकर्ड गर्दछ ताकि तपाईंसँग काम गर्न उत्तम सम्भावित अडियो पाउनुहोस्।
प्रत्यक्ष सम्पादनको लागि साउन्डबोर्ड - तपाईंको रेकर्ड गर्ने क्रममा तपाईंको परिचय, विज्ञापन, वा अन्य अडियो लाइभ घुसाउनुहोस्। पोष्ट प्रोडक्शनको बखत यो सम्पादन गर्न यसले लिने समयको बचत गर्दछ।
बिल्ट-इन VoIP (भ्वाइस आईपी) - तेस्रो-पार्टी सेवा स्काईप वा ह्या likeआउट्स प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दैन। तपाइँ Zencastr को माध्यम बाट तपाइँको पाहुनाहरु संग सीधा आवाज च्याट गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वचालित पोस्ट प्रोडक्शन - तपाईंको रेकर्डिंगलाई प्रकाशनको लागि तयार गरिएको एक पेशेवर मिश्रणमा परिमार्जन गर्नका लागि क्यूरेट गरिएको अडियो बृद्धि भएका एकल मिश्रित ट्र्याक उत्पन्न गर्नुहोस्।
क्लाउड ड्राइव एकीकरण - तपाईंको रेकर्डि easy स्वत: ड्रोपबक्स खातामा सजिलो सम्पादन र साझेदारीको लागि डेलिभर गरियो। गुगल ड्राइव चाँडै आउँदैछ।
नमस्ते ... र यदि तपाईं भर्खरै सुरू गरिरहनु भएको छ भने जेनले सँगै एक पूर्ण पाठ्यक्रम राखेका छन् तपाईंको आफ्नै पोडकास्ट सुरू गर्दै त्यो आवश्यक छ!
ब्रासी ब्रॉडको ब्रास ट्याक्स पोड-क्लास
टैग: behringerडिजिटल मिक्सरमिक्सरपोडकास्टिङzencastr
एक्रेबो: तपाईंको POS अनुभव निजीकृत गर्दै
नेटिभ विज्ञापन भनेको के हो?